XOG CUSUB:Al-Shabaab oo helay Xog Dagaalka Dowladda Farmaajo ay ku qaadi doonto iyo Meesha uu ka bilaaban .. - Hablaha Media Network
XOG CUSUB:Al-Shabaab oo helay Xog Dagaalka Dowladda Farmaajo ay ku qaadi doonto iyo Meesha uu ka bilaaban ..
HMN:- Dowladda madaxweyne Farmaajo hoggaaminaya ayaa dhowaan waxay qaadi doontaa weerar culus oo ka dhan ah Al-shabaab, lana doonayo in dalka looga saarto.
Dagaalkan la qaadi doono ayaa ah mid aad uga duwan kuwii hore ee la qaadi jirey ee degmo ama gobol kaliya lagu dagaallamayey, muddo kadibna la hakinayey.
Xogta sidaan ku helnay dagaalkan ayaa noqon doona midkii ugu dambeeyay, Hal maalin, Saacad iyo daqiiqad qura ayuu ka bilaaban doonaa dhammaan gobollada dalka, gaar ahaan waxay ciidamada weerar ku qaadi doonaan deegaannada Al-shabaab maamulaan.
Xogtu waxay leedahaya, waxaa diyaarsan ciidamadii weerarka qaadi lahaa, waxaana sidoo kale la diyaariyey hubkii iyo saanadihii kale ee Milatariga, kaliya in lagu dhowaaqo ayaa la doonayaan.
Maleeshiyada Al-Shabaab oo heshay Macluumaadkan iyo Xogta Weerarka loo diyaariyey ayaa durba ku bilawday in ay deegaanada Madaxda Maleeshiyadu horay oogu sugnaayeen laga badalo isla Markaan ay ka urursadaan deegaano badan Hubkooda.